Ahlusunno: Rajo gurtey iyo Xukun gurracan! – Bashiir M. Xersi
Ahlusunno: Rajo gurtey iyo Xukun gurracan!
Posted on 16 Jan 2013 23 Jun 2015 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Inta aadan cinwaanka ka caroon, inta aadan Wadaaddada dambe igu xugmin [AL ITIXAAD+ALSHABAAB] inta aadan igu dhibsan eray qallafsan, inta aadan kahan adoo is leh; maxaa Wadaaddada is difaacaya ku tusay?! Inta aadan u damqan dareen aan jirin, bal adoon xuurtaysnayn ila dhiraandhiri inta dhacday, iyo inta dhimman, ee dhawaan soo socota.
Sida loo kala irdhoobay, waxaa baahay BEELAYSI baaxad weyn. Mar ahaa ISKAASHI, mar ahaa DUULLAAN, mar kale ahaa DIIMAYSI, marna ahaa MAAMUL. Inta laqdabada iyo luggooyoda loo heellanaa marka laga reebo, waxaa wax laga dhaxlay, waa midka iskaashiga iyo maamul wadaagga lagu saleeyey, oo noqday furaha nolosha, deegaanno dhawr ahna lagu helay naruuro yar, oo nabad iyo nagaadi ah, yeysanba buurnayn, oo wax la’aan ayey dhaantaaye.
Qallibkii Siyaasadeed, ee dalka ka dhacay, haddii qawlaysato qabiillo ku daaban qoolka xireen, ee dad iyo duunyaba baaba’sheen, AQOONYAHAN iyo INDHEERGARAD lagu diimay, cabsi iyo inaysanba jirin midba. Waxaa la islahaa Wadaaddada iyo Diinta wax dhaama ma lahan. Waa maroo, iyagaa dadka Alle uga dhaw; aqoon iyo garasho awgeed ama ugu dhaw cabsi iyo cibaad darteed. Waa marka kalee, waxaa dadku halkudhig ka dhigteen; haddaan la qabsan XARIGGA ALLE inaan dawlad iyo maamul dhismayn!
Hadda ka hor baa nin MA DUKADE ahaa, wuxuu damcay, inuu SALAADDA dib u billaabo, dabcan HANUUN iyo TAQWO doon buu ahaa. Nasiib wanaag, wuxuu ku soo aaday SALAADDII CASIR, oo ah mid ka mid ah labada SALAADOOD, ee dardaaranka gaarka ah laga baxshay, midda kalana waa SALAADDA SUBAX. Hadduu MASJIDKII galay muxuu la kulamy oo qabsaday?.
Waxaa qabsaday HOOG iyo BA’, go’aanka uu ku qaatay, ay saamayn weyn ku yeelatay noloshiisa intii ka harsanayd. Markuu MASJIDKII galay, ee qaybtii WAYSO qaadka aadayey, ayuu Kabihii isaga siibay ILLINKA MASJIDKA, halkii ayuu ku Wayso dhammayastay, dabadeedna Salaaddii iska dukaday, isagoon wax dareen ah qabin, aan ka ahayn inuu maanta ALLE ugu dhaw yahay intuu noolaa.
Qarracankuu ka qaaday yaaba WADNA QABAD ku noqotay, illeen kama bixi karin inuu Kaba gatee. Miskiin ayuu iska ahaa aan xoolo sidaa ah haysan. Danuba tiri, inuu Kabo raadsadee, Casirkii xigay ayuu maqlay SALAADDA oo la AADAAMAYO, waaba is celin waayey, oo wuxuu la soo booday: “MAQLA, MAQLA, MAQLA, TUUGADII AYAA ISU WACANAYSEE!”
Dhacdadu run iyo mala’awaal midey tahayba, waxay muujinaysaa sida loogu kadsoomay sheekadii WADAADDADU wadeen. Sidoo kale, waxaan u soo qaatay sida loogu hungoobay XARIGGII ALLE, ee la lahaa, wuxuu unug u yahay, dalwad Soomaali oo dhisanta. Oo kaalay, inta dunida dawlado ka dhisan, imisa ayaan XARIG ALLE haysan? Maxaa keenay, inay wax u dhisan yihiin, anaguna aan eber u taagan nahay? Maa runta la abbaaro, oo maaweelada dhan nalaga dhigo? Haddii kale, maalin walba NIMAN aan jirin ayaan sugi doonnaa.
Ayaan darrada baase ahayd, in JIHAADKII noqday JIDGOOYO cusub, illeen talo Tigree iyo tab Xabashi ayaa tubteeda la qaadee. Marka laga hadalayo in AHLUSNNA iska caabinayso falalka gurracan, ee ALSHABAAB, saw iyaguba ma ahan DHAL AMXAARO? Micnaha, saw ma ahan dhisme Amxaaro samaysay, ee ay walibana fangarayso, ciidan aahan iyo cudud ahaanba? Mise iyaga AWLIYO iyo MALAA’IG ayaa ka garab dagaallanta, oo Xabashi uma baahna? Isma dhihine!
Midda aan qofna dood ka qabin waxay tahay, in qofkii ku dhiba, ee dhabbaqo iyo shidaad kaa dayn waayo, aysanna jirin qof kaa celiya ama aadan helayn, ay xaq tahay in aad u doonatid wax kaa hor istaaga, SHAYDAANBA ha noqdee. Malaha waana midda AHLUSUNNO xoogga saartay, hadday taa ku guulaysatay, maxaa xigay? Waana qodobka aan qoramada ku falanqayn doono.
“Ahlusunna: Awood aan Aragti lahayn!” “Shirka Addis Ababa iyo Shuyuukhda Ahlusunna” “Xerta Ahlusunno: Xigaalada Xabashida ee Xilligan!” Iyo “Ahlusunnooy: Lagga aragtaye Laaca ma ogtahay?” oo dhammaan ku qodbanaa talo iyo tusaalayn.
Saddax sano ka dib, DEEGAANKA GOBOLLADA DHEXE yaa taladiisa gacanta ku haya? Haddii qorshe daba dheeraado, wuxuu keenaa daldaloollo badan, sidaa awgeed, kan AHLUSUNNA isagaaba markii hore iska daldaloolaye, maxaa yeelay, haddaadAL uga gabbanayso AL kale, inaadan meel dheer gaarayn way muuqataa. Waxaan uga jeedaa, caqli ahaan WADAAD waa WADAAD, ee waxay ahayd in WADAAdDADA SUBAGLAYDA ah, aan loo dayn maamulka deegaanka. Ma ahan inaysan wax ku lahayn ama loo diidayo, ee waa iyaguba inaysan ka aragti gaddisnayn kuwa ay iska caabinayeen dhanka maamulka iyo awood qaybsigee.
Waxaan uga jeedaa, maamulku waa inuusan salka ku hayn wadaad iyo warkii. Illeen wadaadku inuu Aadane yahay ka sokow, waxaaba nooga filan inta aan indhaheenna ku aragnee, oo dib dambe aannaan ugu dagmayn, waa haddii la doonayo nolol iyo naruuro, haddiise ay tahay, inta ka sacabba jafatid seerada ha loo daayo waa gaar, waana midda aan ka baqayo inay iminka hirgali rabto, haddii aysan hirgalinba.
Sida loo kala guuray, oo kala geeddi loo noqday ayaa loo kala degay. Degid deegaan iyo mid dareenba. Haddana meelaha aan wali degin ee ay ugu horreeyaan deegaannada ay ka arrimyaan AHLUSUNNA ee leh GOBOLLADA DHEXE iyo GOBOLKA GEDO, waa inaan is weydiinnaa waxa keenay arrintan? Waa inaan u helnaa jawaab. Illeen intaa waqtigu waa socdaaye. Maalin walba oo na dhaaftaa dib u soo noqon mayso, haddaan lagu gudan waxqabadkeedee.
9 thoughts on “Ahlusunno: Rajo gurtey iyo Xukun gurracan!”
Pingback: Xaqiiq Sheege( Aqris.net ) – WARBIXIN: Xildhaannow: Xasan ha tagee, maxaa xiga?
Pingback: Xildhaannow: Xasan ha tagee, maxaa xiga? |
Pingback: AHLUSUNNO iima dhaamto ALSHABAAB! -